[07 / 01 / 2020] Goorma ayey Adeegga Masruufka Rize-Artvin bilaabi doonaan adeegga?	08 Artvin
[07 / 01 / 2020] 89% Muwaadiniinta ayaa raba inay iibsadaan Gawaarida Guryaha	16 Bursa
[07 / 01 / 2020] Duullimaadyo dhowr ah ayaa laga joojiyay gegada diyaaradaha ee Istanbul	34 Istanbul
Maalinta: Noofambar 21, 2019
Qalabka elektiroonigga ah ee loo yaqaan 'Halıcı Electronics', oo bixiya waxsoosaarka iibka iyo adeegyada injineernimada ee ku shaqeeya mashiinka iswada, wuxuu fuliyaa mashruucyo-leexasho sida ganacsade ugu weyn ee ABB. Halıcı waa mid ka mid ah dhowr shirkadood oo bixiya adeegyo dhammaan qaybaha shaqada otomaatikada, [More ...]
Sicir-dhimis Injiilka laga helayo Macallimiinta ilaa ORBEL; Kalkaaliyaha Dawladda Hoose ee Magaalada OrBEL A.Ş. 24 wuxuu cadeeyay inay jiri doonaan qiimo dhimis 50% Xarunta Cable Car Facility, Reverse House iyo Adventure Park maalinta macalimiinta ee Nofembar. 24 NOVEMBER PERCENT 50 [More ...]
Wadada Tareenka ee Tayada leh ee Tayada leh ayaa loo dhisay buuraha ku teedsan Trabzon; Dawlada Hoose ee Magaalada Trabzon waxay sii wadaysaa howlaheeda iyada oo loo eegayo Mashruuca Yesilyol, kaas oo ujeedadiisu tahay isku xidhka dhulalka sare ee Badda Madow ee Bariga. Waaxda Dayactirka Jidadka Dowlada Hoose ee Magaalada iyo Qeybta Dayactirka [More ...]
Qaab dhismeedka "Qorshaha Masterka Gaadiidka yapılan la sameeyey xilligii Yaşar Bahçeci ee K inrşehir, Nidaamka dallacsiinta milyan ee 30-dollar wuxuu magaalada ka beddelay goob nalka taraafikada ah. 150 Master Transportation Master Plan ulan oo laga hirgaliyay magaalada Kirsehir oo ay kunool yihiin kun qof [More ...]
Fadeexad weyn ku ah hindisooyinka TCDD! Tenensiyada 1,5 Milyan oo Milyan oo Milyan oo Shirkada Xaaska ah ah; Babacan, oo loo xilsaaray inuu noqdo kormeeraha xarumaha Mashruuca Calaamadaha Tareenka Qaranka, oo ay ku jiraan xaaskiisa iyo maareeyihii hore ee gobolka, [More ...]
Maanta Taariikh: 7 Janaayo 1870 Hirseh Rumeli Railways